Maamulka Buurdhuubo oo sheegay in ka adkaadeen Xoogag ka tirsan Shabaab oo Weerar ku soo qaaday – Daily Som
Maamulka Buurdhuubo oo sheegay in ka adkaadeen Xoogag ka tirsan Shabaab oo Weerar ku soo qaaday
By Staff on March 20, 2018 No Comment
Maamulka Degmada Buurdhuubo ee Gobalka Gedo ayaa sheegay in ay fashilioyiin weerar ay ku soo qaadeen Kooxda alshabaab, maamulka ayaana sheegay in khasaaro ugaysteen kooxdii weerar soo qaaday.
Dagaalka oo dhacay xalay fiidkii ayaa Ciidamada Militariga ee ku dhaqan Buurdhuubo iska difaaceen weerarka alshabaab, dagaalka oo intiisa badan dhacay Xalay galinka hore maanta ayaa xaalada waxa ay ku soo noqtay sidii hore.
Gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali oo warbaahinta la hadlay ayaasheegay in weerar ay soo qaadeen alshabaab isla markaana ay iska difaaceen meelaha ay alshabaab so weerareen ayaa waxaa ka mid ah Xarunta Degmada.
sidoo kale waxa uu sheegay dhabarka ka jabiyeen ayna ku fashlmeen weerar Guracan ay soo qaadeen shabaabka, asiga oo tilmaamay in ay ciidanka iyo maamulka markasta udiyaarsan yihiin difaacada degmada iyo bulshgahda ku nool.
Maamulka Buurdhuubo oo sheegay in ka adkaadeen Xoogag ka tirsan Shabaab oo Weerar ku soo qaaday added by Staff on March 20, 2018